ဝန်ဆောင်မှုကို GOOGLE ကနေတင် SITE ၏အမြန်နှုန်းစစ်ဆေးနေ - GOOGLE က - 2019
အဆိုပါ PageSpeed ​​Insights သုံးပြီးတင်စာမျက်နှာများအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
သငျသညျအစဉျအမွဲ image ကိုတစ်ကျော်ကြားသူရဲကောင်းအဖြစ်ဝငျစားခံရဖို့လိုခဲ့ဖူး, မိတ်ဆွေများများ၏ရုပ်ပုံများကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်, တစ်ဦးရုပ်ပြသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောလမ်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြံစည်ကြသနည်း မကြာခဏရှိသူများကိုအသုံးပြု Adobe က Photoshop ကိုအစားထိုးရန်ပေမယ့်အစီအစဉ်ကိုကွန်ပျူတာနှင့်တန်ဖိုးရှိရှိသံ install လုပ်ဖို့, နားလည်ရန်ခဲယဉ်းသည်ရန်။
ဒီနေ့ကို real-time အခြားမည်သည့်အပေါ်ဓာတ်ပုံများတွင်လူတစ်ဦးကိုအစားထိုးခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုပုံမှန်မဟုတ်သောက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် ပတ်သက်. ပြောပြပါ။ မျက်နှာထောက်လှမ်း function ကိုအသုံးပြုတဲ့အရင်းအမြစ်များ၏အများစုတွင်, အများစုကိုသင်တိကျစွာဓာတ်ပုံထဲတွင်အသစ်က image ကို fit မှခွင့်ပြုပါတယ်။ ဓာတ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက် output ကိုအများဆုံးလက်တွေ့တပ်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်မထွက်ရ, အော်တိုဆုံးမခြင်းခြင်းကိုသည်းခံ။
Method ကို 1: Photofunia
အဆင်ပြေခြင်းနှင့် functional သာအနည်းငယ်ခြေလှမ်းနှင့်အတူအယ်ဒီတာ Photofunia နှင့်ဓာတ်ပုံထဲတွင်မကျြနှာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အချိန်တစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်။ အသုံးပြုသူကိုအဓိကရုပ်ပုံလွှာကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးပုံရှိသမျှသည်အခြားသောလုပ်ငန်းများအော်တို mode မှာထွက်သယ်ဆောင်နေကြတယ်, အသစ်တစ်ခုကိုမျက်နှာနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်သာလိုအပ်ပါတယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏လှုပ်ရှားမှုအလွန်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည် manipulate မဟုတ်ရင်အများဆုံးအလားတူဓာတ်ပုံများ (အရွယ်အစား, မျက်နှာ၏လည်ပတ်, အရောင်) ကိုရှေးခယျြဖို့ကြိုးစားပါ။
ထိုဒေသတွင် "အခြေခံပညာရုပ်ပုံ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လူတစ်ဦးကိုအစားထိုးလိုအပျသောအရာကနဦးပုံရိပ်, load "ဓာတ်ပုံကို Select လုပ်ပါ"။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့ PC မှာထံမှပုံများ, နှင့်အွန်လိုင်းပုံရိပ်တွေနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်, အပြင်, သင်သည်သင်၏ webcam နှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်ပါတယ်။
အသစ်တစ်ခုကိုမျက်နှာနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ပုံထည့်သွင်းခြင်း - ကြောင့်လည်းနှိပ်လိုက် "ဓာတ်ပုံကို Select လုပ်ပါ".
သီးနှံပုံများ, သငျသညျခငျြ, ဒါမှမဟုတ်နဂိုအတိုင်းကစွန့်ခွာလျှင် (ခလုတ်ကိုပေါ်မှအမှတ်အသားများမထိနဲ့ရိုးရိုးကလစ်နှိပ်ပါပါဘူး "သီးနှံ").
ပစ္စည်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ကို tick ထားပါ "Apply အခြေစိုက်စခန်းအရောင်ဓာတ်ပုံကို".
ကျနော်တို့ button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Create".
အဆိုပါအပြောင်းအလဲနဲ့နောက်ဆုံးရုပ်ပုံရဲ့အဆုံးမှာအလိုအလျှောက်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကွန်ပျူတာသို့ Download ပြုလုပ်, သင် button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်နိုင်ပါတယ် "ဒေါင်းလုပ်".
တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ site ကိုသူတို့ဖွဲ့စည်းမှု, အရောင်အဝါဆန့်ကျင်ဘက်များနှင့်အခြား parameters များကိုအလားတူများမှာအထူးသဖြင့်လျှင်, အရညျအသှေးကိုအစားထိုး။ အားလုံး 100% အဘို့အသင့်လျော်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်ရယ်စရာ photomontage ဝန်ဆောင်မှုဖန်တီးရန်။
Method ကို 2: Makeovr
အင်္ဂလိပ်ဘာသာအရင်းအမြစ် Makeovr သင်တဦးတည်းပုံရိပ်ကနေလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကူးယူခြင်းနှင့်အခြားဓါတ်ပုံကိုထဲသို့ paste ခွင့်ပြုပါတယ်။ ယခင်သယံဇာတမှမတူဘဲ, ထို entity ၏အရွယ်အစားနှင့်နောက်ဆုံးဓါတ်ပုံကိုအပေါ်၎င်း၏တည်နေရာကိုရွေးပါ, incised ခံရဖို့ဧရိယာကိုမီးမောင်းထိုးပြသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
ခလုတ်ကိုဆိုက်ကလစ်အပေါ်ဓာတ်ပုံများဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် "သင်၏ကွန်ပျူတာ"ပြီးတော့ - "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်"။ လိုချင်သောပုံလမ်းကြောင်းကို Specify နှင့်အဆုံးမှာအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဓာတ်ပုံ Submit".
ကျနော်တို့ဒုတိယရုပ်ပုံ load အလားတူလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်။
ဧရိယာ clipping အသုံးပြုခြင်းအမှတ်အသားများအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။
ကျနော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ရောသမညာဘက်ဆံပင်နှင့်အတူမျက်နှာ left"သငျသညျဒုတိယပုံရိပ်၏ပထမဦးဆုံးဓါတ်ပုံဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုလွှဲပြောင်းချင်လျှင်၎င်း, စာနယ်ဇင်းများ "လက်ဝဲဆံပင်နှင့်အတူညာဘက်မျက်နှာရောထွေး"ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဖို့ကဒုတိယပုံရိပ်နှင့်အတူလူတဦးကိုလွှဲပြောင်းလျှင်။
သငျသညျအရွယ်အစားနှင့်အခြား parameters တွေကိုပြောင်းလဲလိုချင်သောတည်နေရာရန်ကလစ်ဒေသပြောင်းရွေ့နိုင်ပါတယ်ရှိရာအယ်ဒီတာင်းဒိုးသွားပါ။
အများဆုံးသင့်လျော်သောရလဒ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပေါ်မှာကလစ်လုပ်ပါ။ ပုံသစ်တစ်ခု tab ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
image ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, right-click လုပ်ပြီးကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Save Image ကိုအမျှ".
ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ Photofunia ထက်လျော့နည်းလက်တွေ့ကျကျအတွက် mounting Makeovr အယ်ဒီတာ, ။ အရောင်နဲ့ဆနျ့ကငျြဘထိန်းညှိဖို့တစ်ဦးကအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုအော်တိုဆုံးမခြင်းနှင့်တူရိယာများမရှိခြင်း။
Method ကို 3: Faceinhole
ဆိုက်တွင်, သင်အလိုရှိသောသူတစ်ဦးထည့်သွင်းဖို့လုံလောက်ပါတယ်အရာ, အဆင်သင့်လုပ်တင်းပလိတ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သုံးစွဲသူများသင့်ကိုယ်ပိုင် template ကိုဖန်တီးရန် function ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဒီသယံဇာတအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအစားထိုးများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသို့သော်များစွာသောရွေးချယ်စရာသင်တိကျစွာဟောင်းဓာတ်ပုံအားအသစ်သောမကျြနှာကိုရွေးဖို့ခွင့်ပြုမရရှိနိုင်ပါ, ပိုပြီးရှုပ်ထွေးအထက်ဖော်ပြထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ဆောင်မှု၏မရှိခြင်း - ရုရှားဘာသာစကားနှင့်မြောက်မြားစွာကြော်ငြာ၏မရှိခြင်းကြောင့်အလုပ်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပေမယ့်သိသိသာသာသယံဇာတ loading နှေးကွေးမထားဘူး။
ဝက်ဘ်ဆိုက် Faceinhole ကိုသွားပါ
ဝက်ဘ်ဆိုက်သွားပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်း CREATE" သစ်တစ်ခု template ကိုဖန်တီးရန်။
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "လွှတ်တင်ခြင်း»သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကနေဖိုင်တစ်ဖိုင် upload တင်, သို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက် Facebook တွင်ကနေ add ချင်တယ်ဆိုရင်။ ထို့အပြင် site ကို Internet မှ link တစ်ခု upload တင်, အ webcam သုံးပြီးရုပ်ပုံယူသုံးစွဲသူများကဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
အသစ်က entity အထူးအမှတ်အသားများကို အသုံးပြု. ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မည်ရှိရာဧရိယာထွက်ခုတ်ဖြတ်။
ခလုတ်ကိုတွန်း "Finish ကို" ချုံ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Template ကို Save သို့မဟုတ်ယျတျောနှငျ့အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, တစ်ဦးကို tick ထား "ကျွန်မပုဂ္ဂလိကဒီဇာတျလမျးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပိုနှစ်သက်", အကလစ် "ဒီဇာတ်လမ်းကိုသုံးပါ".
လူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်သည့်ဒုတိယရုပ်ပုံ, load ။
တိုးဒါမှမဟုတ်ပုံတစ်ပုံကိုလျော့နည်းစေပါကလှည့်အတွက်ညာဘက်လက် panel ကိုသုံးပြီးအရောင်အဝါများနှင့်ဆနျ့ကငျြဘပြောင်းပေးပါ။ တည်းဖြတ်ပြီးပြည့်စုံသောအခါခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Finish ကို".
ဓာတ်ပုံကို Save တစ်ခုကို print ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာခလုတ်သုံးပြီးလူမှုရေးကွန်ရက်မှာ download လုပ်ပါ။
အဆိုပါ site ကိုအဆက်မပြတ်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ အင်္ဂလိပ် interface ကိုအသီးအသီး button ကိုတစ်ဦးအဆင်ပြေပုံဥပမာမှတဆင့်ရုရှားစကားပြောအသုံးပြုသူများအတွက်ရှင်းပါတယ်။
အထက်ပါအရင်းအမြစ်များကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုမိနစ်တစ်ဦးအမှု၌တယောက်ကိုတယောက်ဓါတ်ပုံတစ်ပုံမှရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ အသုံးပြုသူလိုအပ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကို download လုပ်ပါ, အခြားအရာအားလုံးဆိုက်သင်ကိုယ်တိုင်စေမည်သာလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ - ဒါဟာအများဆုံးအဆင်ပြေဝန်ဆောင်မှု Photofunia ဖြစ်ထွက်လှည့်။